चन्द्रपुर र वालिङ फाइनलमा भिड्ने – Khel Dainik
चन्द्रपुर र वालिङ फाइनलमा भिड्ने
माघ १६, २०७६ | (PostaComment)
रौतहट (खेलदैनिक) । चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट र वालिङ नगरपालिका, स्याङजा जारी चन्द्रपुर उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा भिड्ने भएका छन् ।
बिहीबार भएको दुई सेमिफाइनल खेलहरुमा आ–आफ्नो खेल जित्दै घरेलु टोली चन्द्रपुर र वालिङले उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन् । पहिलो सेमिफाइनलमा चन्द्रपुरले डिफेन्डिङ च्याम्पियन बिराटनगर महानगरपालिकालाई २–० ले हरायो ।
चन्द्रपुर–६ स्थित शेरबहादुर दर्लामी स्मृति खेलमैदान मै भएको खेलमा चन्द्रपुरका लागि ३५औं मिनटमा रजनी थोकरले पहिलो गोल गरिन् भने ७५औं मिनटमा मेनुका नगरकोटीले दोस्रो गोल गरेकी थिईन् । खेलको वुमन अफ द म्याच मेनुका नै घोषित भईन् । उनले पुरस्कार वापत ट्रफी र पाँच हजार प्राप्त गरिन् ।
त्यस्तै सोही मैदानमा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा वालिङले चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुरलाई समान २–० गोल अन्तरले हरायो । वालिङको जितमा दुवै गोल अमिषा कार्कीले १५ र ७६औं मिनटमा गरिन् । खेलको वुमन अफ द म्याच भने वालिङकी सरिश्मा थापा घोषित भईन् ।
अब उपाधिका लागि चन्द्रपुर नगरपालिका र वालिङ नगरपालिका यहि माघ १८ गते शनिबारका दिन फाइनलमा भिड्ने छन् । फाइनल खेल दिनको २ बजेदेखि शुरु हुने आयोजक रौतहट जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ ।
← एनआरटीको जितमा राजेशको दुई गोल मोर्गन क्वाटरफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ १६, २०७६
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ १६, २०७६
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ १६, २०७६
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ १६, २०७६
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ १६, २०७६
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ १६, २०७६